တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: android ဖုန်းတွေအတွက် antivirus apk
android ဖုန်းတွေအတွက် antivirus apk
နေ့ စဉ်နှင့် အမျှ အင်တာနက်မှာ အန္တာရယ် ရှိတဲ့ Website တွေကိုဝင်ရောက်နေတာကိုသင်သတိထားမိပါသလား.....? မိမိတို့ ရဲ့ ဖုန်းစွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ပျက်ဆီးဝါးမြို တတ်တဲ့ ဆိုဒ်တွေကိုရောသင်ဘယ်နှစ်ခါဝင်ရောက်ပြီးပြီလဲ ။ ဒါဟာတကယ့် ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်သင့် တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်တာက
android ဖုန်းတွေအတွက် Security &amp; Antivirus Premier ဆိုတဲ့ app လေးပါပဲ။ ဒီကောင်လေးက (၃ .၁၀. ၂၀၁၃ ) ရက်နေ့ မှထွက်တဲ့antivirus app လေးပါ။(play store မှာသူ့ ရဲ့ တန်ကြေးက 10 $ အထက်မှာရှိပါတယ်။သူက အလိုအလျှောက် virus တွေကို စစ်ဆေးပေးပြီး။ အန္တာရယ်ရှိတဲ့app တွေကို install မလုပ်ခင်မှာလည်းသတိပေးခြင်း။အန္တာရယ်ရှိတဲ့ virus လင့် တွေ websites တွေကိုဝင်ရောက်မယ်ဆိုရင်ကြိုတင်သတိပေးတဲ့ အတွက်ကြောင့် အသုံးပြုသင့် ပါတယ်။မည်သည့် ဖုန်းအမျိုး
အစားနှင့် မဆိုကိုက်ညီမှူ ရှိပြီး ဖိုင်ဆိုဒ်က (2-MB ) ပဲရှိတာကြောင့် ဂိမ်းတစ်ခုလောက်ကိုနေရာပေးစရာမလိုပါဘူး ။စမ်းသုံးကြည့် ချင်တယ်ဆိုရင်အောက်မှာယူပေးပါ။
အပြည့် အစုံဖတ်ချင်ရင် playstore မှာဝင်ဖတ်ပေးပါ။
DOWNLOAD - Zippyshare , solidfiles , mediafire
Posted by အောင်မျိုး at 7:44 PM